Zụ ahịa na Singapore | Akụkọ Njem
Zụ ahịa na Singapore
Njem Asia | | General, Osimiri, Rep. Singapore, Singapore, Asia njem
Ọ bụrụ n’abeghị Eshia, Singapore bụ otu n’ime nhọrọ kachasị mma ịmalite. Ọ bụghị naanị n'ihi na site na obodo a ị nwere ohere ịnweta mpaghara Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia niile, kamakwa n'ihi na ọ bụ obodo nke oge a, dị ọcha ma n'otu oge ahụ jupụtara na ọdịiche.
Agara m Singapore ọtụtụ oge n'onwe m, na n'uche m enwere ọrụ atọ ị na-agaghị echefu n'obodo a: ịzụ ahịa, iri nri na ịpụ n'abalị. Taa, m ga-ekwu maka ebe kachasị mma ịga ahịa na Singapore.
1 Chazọ Orchard
2 Street Arab
3 Obere India
5 Ugboma Street
7 Ogige Marina
8 Ogige Parkway
9 Raffles obodo
10 Obodo Obodo Holland
Nke a bụ isi ụzọ Singapore, ebe a na-etinyekarị ụlọ ahịa ịzụ ahịa dị oke ọnụ. Nwere ike ịchọta ọla, akwa Peasia na Afghanistan na ụdị ejiji dị ka Armani, Gucci na Valentino.
Otu esi ebe ahụ: Iji MRT (ụzọ ụgbọ oloko) ị nwere ike ịkwụsị na ọdụ Orchard, Somerset ma ọ bụ Dhoby Ghaut.
A makwaara dị ka Kampong Glam, ọ bụ obi ndị obodo Alakụba na Singapore. N'ebe a, ị nwere ike ịchọta ụdị akwa dị iche iche na ọnụ ahịa ọnụ ahịa, mgbe ị na-agagharị n'etiti bazaa.
Otu esi esi ebe ahụ: na MRT (metro) ị nwere ike ịkwụsị na ọdụ Bugis.
Obi abụọ adịghị ya na agbata obi ndị Indian dị na Singapore bụ obodo kachasị mma na obodo ahụ. Ndị mmadụ na-ejupụta ya mgbe ụfọdụ, ụlọ ahịa ụfọdụ anaghị adịkwa nso. N'etiti aromas aromas ị nwere ike ịzụta ọla edo, ọla ọcha na ọla. Nwekwara ike ịchọta ụdị ejiji ndị India dị ka punjabis na saris. N'ime ụfọdụ ụlọ ahịa ndị a ị nwere ike ịchọta ọnụahịa kacha mma na Singapore.
Otu esi ebe ahụ: iji MRT (ụzọ ụgbọ oloko) ị nwere ike ịkwụsị na ọdụ Little India.
Ebe ọ bụla ị gara, ị ga-ahụ ụlọ ahịa ndị China, na Singapore abụghịkwa otu. Na Chinatown ị nwere ike ịzụta mkpụrụ osisi. ọgwụgwọ ọdịnala, silks, ọla edo na ọla. I nwekwara ike izu ngwaahịa aka.
Ga-aga ebe ahụ: iji MRT (ụzọ ụgbọ oloko) ị nwere ike ịkwụsị na ọdụ Chinatown.
Okwu ahụ bụ 'Bugis' na-ezo aka n'agbụrụ ndị Indonesia a maara maka itinye aka na paireti. A maara n'okporo ámá a na mbụ maka inwe ndụ abalị dị egwu. Taa, ọ bụ n'okporo ámá kpuchiri ekpuchi nke jupụtara n'ụlọ ahịa na ụlọ ahịa. Nwere ike ịchọta uwe mmebe na jeans.
Mpaghara a dị n'etiti obodo ọdịnala ọdịnala ndị Malay. Pre-colonial na ọdịdị, ị nwere ike ịchọta ngwa nri, egwu pop, nka na azụ, na ihe ndị ọzọ.
Otu esi esi ebe ahụ: na MRT (metro) ị nwere ike ịkwụsị na ọdụ Paya Lebar.
N'ịbụ nke dị n'ógbè azụmahịa, Marina Square nwere ihe dị ka ụlọ ahịa 250. Offọdụ n'ime ha bụ ụlọ ahịa pụrụ iche dịka nke na-ere naanị akwa ime Calvin Klein.
Otu esi ebe ahụ: iji MRT (ụzọ ụgbọ oloko) ị nwere ike ịkwụsị ọdụ ọdụ stationlọ Nzukọ Obodo.
N’ebe a ị nwere ike ịchọta ihe karịrị ụlọ ahịa 250 na-enye uwe ụmụaka, akwa akpụkpọ anụ na egwuregwu. Also nwekwara ụlọ oriri na ọ ethnicụ ethnicụ agbụrụ, spa na Starbucks.
Ga esi rute ya: bọs, ahịrị 15, 31,36,76,135,196,197,966,853.
Ejikọtara Raffles City Shopping Center na Raffles Hotel. Nwere ike ịchọta uwe ndị mmebe, nnukwu ụlọ ahịa nri, ụlọ nri na ụlọ nri agbụrụ.
Otu esi esi ebe ahụ: iji MRT (ụzọ ụgbọ oloko) ị nwere ike ịkwụsị na ọdụ Raffles Ebe.
Obodo Obodo Holland
Ndị Dutch chịrị Singapore na mbụ, ndị Britain mechara weghara ya. Holland Village bụ otu n'ime ụlọ ezumike, ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ mmanya mmanya na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ qualityụ.
Ga-esi ebe ahụ: bọs, ahịrị 7 na 106 si Orchard Boulevard.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Zụ ahịa na Singapore
Achọrọ m ịzụta uwe na ntanetị na Singapore ma achọrọ m ịkwado m ụfọdụ ndị nwere ọrụ na nke na-enye mma na ezigbo ọnụahịa ...
hello biko ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ike ịkpọtụrụ m iji bupu ọlaọcha ọla edo ma ọ bụ ọla ọla na Singapore
Osimiri Mekong gafere: Tibet, China, Burma, Thailand, Laos, Cambodia na Vietnam